के HEB ले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ? - उत्तर दिए!
घर / स्याउ पे, किराना पिकअप र वितरण, HEB कर्बसाइड, HEB होम डेलिभरी / के HEB ले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ?
1 के HEB ले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ?
1.1 के HEB का कार्ड मेशिनहरु सम्पर्क रहित भुक्तान समर्थन गर्दछ?
1.2 किन एचईबीले एप्पललाई उनीहरूको कार्ड मशीनहरूमा भुक्तान गर्न सक्षम गर्दैन?
1.3 तर एप्पल भुक्तान मात्र छैन?
1.4 HEB का अन्य सम्पर्कविहीन किनमेल विकल्पहरू
होईन, HEB ले Apple Pay लिदैन। यो लाजमर्दो छ किनकि सम्पर्कविना भुक्तान विधिहरू COVID-19 युगमा सुविधाजनक र सफा छन्। कम्पनी जसले आफैलाई किनमेल गर्नेहरूलाई पहिलो स्थानमा राख्ने गर्व गर्छ, एप्पल पे को प्रयोग गर्न अस्वीकार एक विस्मित चाल हो। यो एक भुक्तानी विकल्प हो जसले वास्तवमा पसलको परम्परागत चेकआउट अनुभव बदल्छ। यो स्पष्ट रूपमा केहि किनमेलकर्ताहरू हामी आशावादी छौं कि HEB निकट भविष्यमा उनीहरूको धुन परिवर्तन गर्दछ।
के HEB का कार्ड मेशिनहरु सम्पर्क रहित भुक्तान समर्थन गर्दछ?
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, HEB को कार्ड मेशिनहरू एप्पल पे जस्ता सम्पर्कविहीन भुक्तानी विधिहरू लिनको लागि पहिले नै सेट अप गरिएको छ। तिनीहरूले भर्खरै यसलाई सक्षम गरेनन्! अर्को पटक तपाईले 'NFC' लोगो खोजेर जाँच गर्नु भएको आफ्नै लागि तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। एनएफसी भनेको 'करीव फिल्ड कम्युनिकेशन' हो र यो एप्पल पे जादूलाई शक्ति प्रदान गर्दछ। कसले तिनीहरूको आईफोन वा एप्पल वाचको साथ भुक्तानी मनपराउँदैनन् उनीहरूको क्रेडिट कार्डलाई फोहोर कार्ड मेसिनमा राख्नु बिना?
किन एचईबीले एप्पललाई उनीहरूको कार्ड मशीनहरूमा भुक्तान गर्न सक्षम गर्दैन?
तपाई आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ कि किन HEB ले एप्पल पे सक्षम गरिरहेको छैन किनकी तिनीहरूको कार्ड मेशिनले यसलाई पहिले नै समर्थन गर्यो। हामी पनि छक्क पर्छौं। सायद उनीहरू सोच्छन् कि यसले उनीहरूको नयाँ HEB Go अनुप्रयोगसँग प्रतिस्पर्धा गर्दछ जुन केहि स्थानहरूमा उपलब्ध छ। वा हुन सक्छ कि तिनीहरूले सोच्दछन् कि एचईबी कर्बसाइड पिकअप र होम डेलिभरी प्रस्ताव गर्नु भनेको उनीहरूलाई एप्पल भुक्तानको चिन्ता गर्नु पर्दैन। यद्यपि वास्तविक जवाफहरू हुन सक्दैनन्। हुनसक्छ यो शुल्क छ? सम्भवतः एप्पल पेले व्यापारीहरूलाई चार्ज गर्दैन। यदि यो शुल्क छैन भने, त्यसो भए किन HEB विगतमा अडिग छ जब यो सम्पर्क रहित भुक्तानीको कुरा आउँछ?
हामी सोच्छौं कि यो केवल जड़त्वको कुरा हो। कम्पनीको लागि परिवर्तन गर्नु भन्दा केहि गर्न सजिलो छ। जे भए पनि त्यो परिवर्तन एक ग्राहक मैत्री चाल हो जुन HEB का ग्राहकहरु स्पष्ट रुपमा चाहान्छन्। हामी आशावादी छौं कि HEB ले उनीहरूका ग्राहकहरूको कुरा सुन्न सुरु गर्नेछ, सही कुरा गर्नुहोस्, र लाखौं अन्य व्यापारीहरूसँग सामेल हुनेछन जसले एप्पलको पेलाई पहिले नै स्वीकार्छन्। यो भविष्यको तरंग हो र यसले ग्राहक सेवालाई पहिले राख्छ।
तर एप्पल भुक्तान मात्र छैन?
यदि तपाईंले एप्पल पे पहिले प्रयोग गर्नुभएको छैन भने, तपाईंलाई यो बुझ्दिन कि यो किन यत्ति लोकप्रिय छ। हामीले यसलाई कहिले पनि बुझ्न सकेनौं तर हामीले यसलाई सेट गरेपछि हामी कहिले पछाडि फर्कने छैनौं। केवल तपाइँको एप्पल वाच वा आईफोन ट्याप गरेर भुक्तानी गर्न सक्षम हुनु तपाइँको वालेट वा पर्समा खन्नबाट एक उडी अगाडि छ।
HEB का अन्य सम्पर्कविहीन किनमेल विकल्पहरू
HEB लाई निष्पक्ष हुन तिनीहरूसँग अन्य सम्पर्कविहीन किनमेल विकल्पहरू छन्। यी विकल्पहरूले तपाईंलाई या त भण्डारमा जानबाट जोगिन दिन्छन वा नियमित चेकआउट लाइनबाट बच्न दिन्छ। तपाई एचईबी कर्बसाइड पिकअप प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तर त्यो स्वतन्त्र मात्र हो यदि तपाईं केही दिन पछि तपाईंको खाद्यान्नहरू टिप्न ठीक हुनुहुन्छ भने। उल्लेख गर्नु पर्दैन कि तिनीहरूले items% सम्ममा तपाईंको वस्तुहरू मार्कअप गर्छन्। उनीहरूसँग होम डिलिभरी पनि छ तर त्यो कुनै पनि हिसाबले निशुल्क छैन र मूल्यहरू पनि चिन्ह लगाइनेछ। त्यसो भए त्यहाँ एचईबी गो छ, जुन एक नयाँ अनुप्रयोगमा आधारित शपिंग अनुभव हो जसले तपाईंलाई नियमित चेकआउट लाइन स्किप गर्न दिन्छ। यो राम्रो छ तर यो केवल केहि स्टोरहरूमा उपलब्ध छ र तपाईं आफ्नो आफ्नै खाद्यान्नमा झोला लाग्नुहुन्छ। यो समय को लागी एक काम गर्न को लागी गर्छ कि उनीहरूको एप्पल पे ग्राहकहरु खुशी हुनेछ - यसलाई सक्षम गर्नुहोस्!
अनुप्रयोग आधारित भुक्तानस्याउ भुक्तानसम्पर्क रहित भुक्तानकर्बसाइड पिकअपकिराना पसलHEBहोम डेलिभरी स्याउ पेकिराना पिकअप र वितरणHEB कर्बसाइडHEB होम डेलिभरी
एउटामा सोच्न थाल्यो "के एचबीले एप्पलको भुक्तानी लिन्छ?"
जनवरी 18, 2021 1 मा: 54 हूँ
अधिक सहमति गर्न सकेन। म शुल्क को बारेमा तथापि आश्चर्य छु। मलाई थाहा छ एप्पलले सेवाहरू प्रयोग गर्नका लागि व्यापारीहरूबाट शुल्क लिदैन, तर म बैंकिchan व्यापारीहरू (इलेक्ट्रोनिक रूपमा लेनदेन अधिकृत गर्ने व्यक्तिहरू) को बारे यति निश्चित छैन। स्वाइप शुल्क व्यापारीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण लागत हुन सक्छ। यदि उदाहरणका लागि स्वाइप शुल्क आधा प्रतिशत बढी छ किनभने यो मेशिनमा राखिएको थिएन (कार्ड मान्य छ) तब क्रेडिट कार शुल्क बढी हुनेछ, एप्पलबाट मात्र होईन। केवल एक विचार।
यो फेरि कहिल्यै वालेट नलगाउन भयानक हुनेछ।